အ​မေ​ပြော​တော့ငယ်​​သေးတယ်​..​ရေချိုးမှသိမယ်​ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အ​မေ​ပြော​တော့ငယ်​​သေးတယ်​..​ရေချိုးမှသိမယ်​
Posted by ခရီးသည်ကြီး on Nov 23, 2013 in Creative Writing | 18 comments
တခါတရံ၌ ​ရှေးလူကြီးများ​ပြောခဲ့​သော ဒန့်​ကျွဲပင်​ ပခက်​လွှဲဆိုသည်​ကို
ပြန်​လည်​သတိယမိသည်​ ။ ​ခေတ်​မှီတိုးတက်​ခြင်းသည်​ လူမှုဝန်းကျင်​ကို​ပြောင်းလဲ​စေ​သော်​လည်း
အကျိုးရှိစွာ​ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်​ အကျိုးမဲ့ ​ပြောင်းလဲခြင်းဟူ၍
ကွဲပြားပါလိမ့်​ဦးမည်​ ။ အကျိုးမဲ့​စေ​သော ​ပြောင်းလဲမှုများကို​တော့ စာ​ရေးသူအ​နေဖြင့်​ မကြိုဆိုပါ ။ အရာရာတိုင်း​ပြောင်းလဲလျှင်​
အထူးသဖြင့်​ဆိုရ​သော်​ အိမ်​​ထောင်​သား​မွေး ၊ ချစ်​သူရှာခြင်း နှင့်​
လူ​နေမှု ပုံသဏ္ဍန်​စရိုက်​တို့ဖြစ်​​လေသည်​ ။ ​ပြောင်းလဲတိုးတက်​ရမည်​ဆို​သော်​လည်း ​ခေတ်​မှီတိုးတက်​​သော အ​နောက်​နိုင်​ငံကြီးများကို
လူအများစုကြား၌​ခေတ်​စား၍အသုံးများကြသည်​မှာ ​ဖေ့စ်​ဘွတ်​ ဖြစ်​သည်​။
မြန်​မာပြည်​ကွန်​နက်​ရှင်​ဖြင့်​ အဆင်​​ပြေသည်​ကတ​ကြောင်း၊အသုံးပြုရလွယ်​သည်​ကတ​ကြောင်း ​ကြောင့်​ ​တောရွာများမှာပါ အသုံးပြု​နေကြသည်​။
အများသိပြီးသည့်​အတိုင်း ဆိုရှယ်​ဝဘ်​ဆိုဒ်​ဖြစ်​သည်​နှင့်​အညီ လွတ်​လပ်​ခြင်းနှင့်​အတူ
သန်း​ပေါင်းများစွာ​သော အ​ကောင့်​များ​ထွေး​ရောယှက်​တင်​ ပါဝင်​​နေရာ အသုံးပြု​သောသူ၏ ပုံသဏ္ဍန်​ကိုလိုက်​၍ အဆိုးအ​ကောင်းတို့ဒွန်​တွဲလျှက်​ရှိ​လေသည်​ ။
အွန်​လိုင်းချစ်​သူ၊ အွန်​လိုင်းလင်​မယားတို့မှာ အရွယ်​​ရောက်​ပြီးသူတို့အတွက်​ ​ပြောစရာမရှိ​သော်​လည်း
အသက်​ ၁၂ နှစ်​ ၁၃ နှစ်​ ၁၄ နှစ်​ အရွယ်​အတွက်​ ဆိုပါက
အလွန့်​အလွန်​ ​စော​နေပါလိမ့်​မည်​ ။ ယခု​ခေတ်​ ထိုသို့​သောအရွယ်​​လေးများသည်​ အွန်​လိုင်း​ပေါ်တွင်​
​နေရာယူ​နေကြ​လေပြီ ။ မိမိကိုယ်​ကို အပျိုဖားဖားကြီးအသွင်​ယူ၍
ဓတ်​ပုံများစွာ တင်​ကြသည်​ ။ စာ​ရေးသူအ​နေ ဖြင့် ပြင်​ပတွင်​ သိကျွမ်း​နေ​သော က​လေးမ​လေးများဆိုလျှင်​
​Fb ​ပေါ်တွင်​မမှတ်​မိခဲ့ပါ။ သူတို့အား အရွယ်​​ရောက်​ပြီးအပျိုကြီးများဟု ထင်​မိပါ​သေးသည်​ ။
လွန်​ခဲ့​သော လအနည်းငယ်​က မိတ်​​ဆွေဖြစ်​သူ၏​ပြောပြချက်​အရ ဖြစ်​ရပ်​မှန်​ဇတ်​လမ်းတစ်​ခုအား
ထိုသို့​သောဇတ်​လမ်းများ အများအပြားရှိကြမည်​ကိုလည်း ယုံမှားသံသယမရှိပါ ။ ဖြစ်​ရပ်​ကို​ပြောရပါလျှင်​ …
ခုနှစ်​တန်းအရွယ်​သမီးငယ်​​လေးအား မိဘများမှ စု​ပေါင်းကျူရှင်​ပြ​သောဝိုင်းသို့ လာပို့​ပေးပါသည်​ ။
မိဘအလစ်​တွင်​ က​လေးမ​လေးမှာ ကျူရှင်​သို့မတက်ပဲ သူ့ရွယ်​တူ​ကောင်​​လေးနှင့်​ချိန်း​တွေ့သည်​ ။မကြာခဏလည်း​ကျောင်း​ပြေးပြီး ချိန်း​တွေ့ကြသည်​ ။ ကျူရှင်​သို့လည်း မကြာမကြာပျက်​ကွက်​သဖြင့်​ မထူးခြားသလိုဖြစ်​​နေသည်​ ။ သို့နင့်​…
မိဘများက ကံ​ကောင်းစွာသိရှိပြီး​နောက်​ ​မေးမြန်းစုံစမ်း​လေ​သောအခါ
​ဖေ့စ်​ဘွတ်​ တွင်​​တွေ့ပြီး ရီးစားဖြစ်​ကြသည်​ ဟု သိရ​လေသည်​ ။
စာ​ရေးသူသည်​ အွန်​လိုင်းသုံးခြင်းကို မကန့်​ကွက်​ပါ ။
သို့​သော်​ … သင့်​​တော်​သည့်​ ကြီးကြပ်​ထိန်းသိမ်းမှု​တော့ ရှိသင့်​သည်​ထင်​ပါသည်​ ။
ယ​နေ့​ကျောင်းများ ကျူရှင်​စာသင်​ဝိုင်းများသည်​လည်း ​ကျောင်းသား​ကျောင်းသူတစ်​​ယောက်​မလာလျှင်​
အိမ်​သို့ ​မေးမြန်းစုံစမ်းသင့်​သည်​ ။ ပိုက်​ဆံရပြီး လျှင်​ပြီး​ရော ဟု ​မေ့​မေ့​ပျောက်​​ပျောက်​သ​ဘောမထားသင့်​ပါ ။
ထို့အတူ .. ​တွေ့ဖူး​သောဖြစ်​ရပ်​တစ်​ခုကို ဥပမာထားဆိုရပါလျှင်​ ….
လွန်​ခဲ့​သော ၃ နှစ်​ခန့်​က ​မြောက်​ဥက္ကလာရှိတည်းခိုခန်းတစ်​ခုအတွင်းမှ
အဖြူအစိမ်းဝတ်​စုံဖြင့်​ က​လေးစုံတွဲထွက်​လာသည်​ကိုမြင်​ခဲ့ဖူးပါသည်​ ။
ထိုသို့​သော တည်းခိုခန်းများ ၊ဟိုတယ်​ မိုတယ်​.အင်း များအ​နေဖြင့်​ ​ငွေရ​ရေးကိုဦးစားမ​ပေးပဲ
​​ခေတ်​ကို အပြစ်​မတင်​ပါ ။ စံနစ်​ကိုလည်း အပြစ်​မတင်​ပါ။
လူသာ ပဓာနကျသည်​ဟု ဆိုချင်​ပါသည်​ ။
မိမိနှင့်​တကွ ပတ်​ဝန်းကျင်​ကပါ ဝိုင်းဝန်းပြုပြင်​ထိန်းသိမ်းပါက
သီးချိန်​တန်​သီး ၊ ပွင့်​ချိန်​တန်ပွင့် ဆို​သော်​လည်း ….
ဤအရွယ်​​လေးများ က​လေးအ​ဖေ ၊က​လေးအ​မေ၊ ဖြစ်​လာကြမည်​ဆိုပါလျှင်​ ​​ဒန့်​ကျွဲပင်​ပခက်​ဆင်​ ဟူ​သော​ရှေးစကား မှန်​​နေပါလိမ့်​မည်​ ။
ထိုစကား ကို စာ​ရေးသူတို့ ​တော်​လှန်​ရန်​ မသင့်​​ပေသ​လော ။
​လေတိုက်​တိုင်း.၊သစ်​ရွက်​လှုပ်​တိုင်း စိတ်​ကစားတတ်​​သော ဤလူမမယ်​အ​ပျို​ဖော်​ဝင်​စ​ သားသမီး​လေးများက်ို
စာ​ရေးသူတို့အ​နေဖြင့်​ သင့်​​တော်​သလိုကူညီထိန်းသိမ်းလမ်းညွှန်​ရန်​ မသင့်​ပါသ​လော ..။
လစ်​ဗင်းတူဂဲသားကို အလွဲသုံးစားလုပ်​​လေ့ရှိ​သော စာ​ရေးသူတို့နိုင်​ငံတွင်​ အရွယ်​မ​ရောက်​​သေး​သော က​လေးသူငယ်​များအား
အလွဲသုံးစား မစမ်းသပ်​​စေချင်​​ပေ ။
မည်​သို့​သော နည်းလမ်းများဖြင့်​ လမ်းညွှန်​သင့်​သည်​ကို မိဘများနှင့်​ ပတ်​ဝန်းကျင်​မှ ​ဆောင်​ရွက်​နိုင်​ပါက… မီးတစ်​မီး​တော့ ငြိမ်းမည်​ထင်​ပါသည်​ ။
View all posts by ခရီးသည်ကြီး →
ဂျူးနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်တဲ့ ရာဂျူး says:
ဆန္ဒရဲ့ မုဆိုး တွေ စာရင်းထဲ
အဲဒီ ခလေးမကျ လူကြီးမကျလေးတွေ ပါနေတာ
ပြင်ရမှာတွေ. . . .
သမီမိန်းကလေးမွေးထားသူမိဘများ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ မျက်လုံးဒေါက်ထောက်ကြည့်
ဆင်ဆာ ဆင်ဆာနဲ့ ဒီသိကြား အော်နေတာ ဒါတွေမြင်လို့ပါ။
အတုယူမှားရင် သိပ် ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်
ဟိုးး အရင်တုန်းက မိဘတွေ မထိန်းနိုင်ရင်တောင် ပတ်ဝန်းကျင်က၊ ရပ်ကွက်က ဝိုင်းလို့ ဝန်းလို့ ပဲ့ပြင်ဆုံးမ ပေးကြတယ်။
အခုတော့ ကိုယ့်အတွက် တစ်ခုပဲ ကြည့်တဲ့သူတွေ များလာတာဆိုတော့
ဆုံးမမယ့်သူတွေ၊ အမြင်မတော်တာကို ဟန့်ပေး မာန်မဲပေးမယ့်သူတွေ ပျောက်ကုန်ပြီကိုး
ဥပဒေတစ်ခုခုနဲ့ တိတိကျကျတော့ လုပ်ဖို့ လိုပြီ ထင့်
အင်တာနက်ကို သွားပိတ်လို့ မရတော့
ကိုယ်တွေကပဲ သူတို့ကို ပြန်ထိန်းရတော့မပေါ့……..
အင်းမိဘတွေကလဲမိဘတွေပဲလေ ကိုယ့်သားသမီးဘာလုပ်နေသလဲတော့ အနဲဆုံးလေ့လာနေသင့် ပါတယ်။ ကိုယ့်သားသမီးပြောတိုင်းမယုံသင့်ပါဘူး။ နောက် ကျူရှင်ဆရာ တည်းခိုခန်း အထွေထွေအနေနဲ့ကတော့ ဘယ်လိုပြောရမယ်တောင်မသိတော့ပါဘူး။ ခေတ်ကြီးကိုက ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော စိတ်ဓါတ်တွေသွပ်သွင်းမှိုင်းတိုက်ခံခဲ့ရတော့ အင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးဘယ်လိုပြောရမယ်တောင်မှမသိ
ည lay says:
မလွယ်တဲ့ အရွယ် တယ်ခက်တယ် ဘိုလုပ် ရမလဲ ?
ကလေးတွေ ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ မြှင့်တင်နိုင်ဖို့ ပညာရေးစနစ်ကောင်းကောင်းလိုပါတယ်…
စာများများ ဖတ်ဖို့ လိုပါတယ်…
တချို့ ကလေးတွေ.. စာများများဖတ်ကြပါတယ်..
ဘာညာစာအုပ်ရှိလား..ဆိုပြီး.မေးမေး..၀ယ်နေကြတဲ့ကောင်လေးတွေ.မှ အများကြီး..
ကျွန်တော် အဲဒီ စာအုပ်တန်းဘက်..စာအုပ်အဟောင်းသွားငေးတိုင်းလည်း..
ဘာညာစာအုပ်..ရှိတယ်..ယူမလား..လို့ကပ်တိုးလေးတွေ.လာလာမေးကြတဲ့ .. စာအုပ်ရောင်းသူတွေ..နဲ့
စာပေလောကကြီး..လည်း..ချဉ်စူးစူး အနံ့တွေ..ရနေပါလားလို့ တောင်..တွေးမိတဲ့အထိ…
တကယ်ဆို ဒီအကြောင်းပြောချင်တာကြာပါပြီ… ပြောစရာအခွင့်အရေးမပေးသေးလို့ မပြောမိတာပါ…
အရင်ဆုံးပြောချင်တဲ့ကိစ္စကတော့ဖြင့် ကလေးသူငယ်များအား လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းလို့
ကျွန်တော်တို့က ကလေးငယ်များ… လူငယ်များကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရမှာ…
တကယ်တန်း လက်တွေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့ရတာ… လက်ရှိမြင်တွေ့နေရတာအားလုံးက…
ကလေးငယ်များ… လူငယ်များကို မိဘများ… ဆရာသမားများက ပုံသွင်းယူနေကြတာ…
ကျွန်တော်ပြောနေကျစကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်… လေးထောင့်ပုံကို အ၀ိုင်းထဲရိုက်သွင်းမှတော့…
အရင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သင့်တဲ့အချက်က မင်္ဂလာပါဆရာမဆိုပြီး လက်ပိုက် ခေါင်းငုံထားရတဲ့…
ကြိမ်တ၀င့်ဝင့်နဲ့မို့ ပြန်မပြောရဲတဲ့ဘ၀ရောက်နေတဲ့ ကလေးသူငယ်များ… လူငယ်များရဲ့ဘ၀ကို…
တနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင်… စာသင်ခန်းနဲ့ နေအိမ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ကို
ကလေးသူငယ်တွေ… တည်းခိုခန်းရောက်တာ… အရက်ဆိုင်ရောက်တာ… ဆေးလိပ်သောက်တာ
အဓိကတရားခံက ရောင်းချသူတွေတင်မပါဘူး… စာသင်ပေးနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေ…
စာကျက်စာဖတ်ဖို့ အချိန်တိုင်းတိုက်တွန်းနေတတ်တဲ့မိဘတွေလဲ တရားခံပါ…
ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ ၁၀နှစ်လုံးလုံး အခြေခံပညာရေးစနစ်ထဲမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်…
ကျွန်တော်ကျောင်းနေမပျော်ခဲ့ပါဘူး… အဲ့လိုပဲ စာလဲမတော်ခဲ့ပါဘူး…
စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းတဲ့ သင်ကြားမှုစနစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲက ကျူရှင်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်…
ကျူရှင်ဟာ တကယ်တော့ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ ပျော်ရွှင်စွာကြီးပြင်းဖို့အချိန်တွေကို လျော့ကျအောင်
ကလေးငယ်တွေ ဘယ်မှာအပျော်ရှိပါသလဲ… ဘယ်မှာစိတ်ထွက်ပေါက်အဖြစ်ရှိမလဲ…
ကျုပ်တို့တောင် တစ်နေ့ကို (၈)နာရီထက်ပိုပြီးအလုပ်လုပ်ရင် Stress တွေဖြစ်လာကြသေးတာ…
တစ်နေ့ကို ၁၀နာရီထက်ပိုပြီး စာသင်… စာကျက်လုပ်နေရတဲ့ ကလေးငယ်တွေအတွက်…
Stress မရှိဘူး… အချိန်တန်ထမင်းစားရတယ်… ဘာအလုပ်မှမရှိလို့ စာပဲကျက်… စာပဲဖတ်လို့
လုပ်လို့မရဘူး… သူတို့လေးတွေလဲ သွေးနဲ့ကိုယ်… သားနဲ့ကိုယ်ပါပဲ…
အဲဒီတော့ ကျောင်းနေပျော်စေရေး… အရင်ဆုံးလုပ်ရပါ့မယ်…
အတန်းထဲမှာ အဆင့် (၁)ရဖို့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ပျော်ရွှင်လှပတဲ့ငယ်ရွယ်မှုဘ၀တစ်ခုလုံး
စတေးခံလိုက်ရအောင် တန်ပါသလားလို့ ပြန်စဉ်းစားစေချင်တယ်…
စိတ်ကူးကြည့်ပါ… အလုပ်ကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး ခွင့်ယူမယ်…
ကလေးငယ်ကျတော့ ကျောင်းကလစ်ရင် အိမ်ပြန်လို့မဖြစ်ဘူးလေ… အဲဒီတော့ တခြားသောနေရာတွေသွားမယ်… ဒါဆိုရင် ကလေးတွေလမ်းမှားရောက်ဖို့ အခွင့်အရေးပိုများလာပြီ…
ကလေးသူငယ်တွေ လမ်းမှားရောက်အောင်တွန်းပို့နေတာ… လမ်းဘေးက ဆင်ဆာမဲ့တွေမဟုတ်ဘူး…
လူကြီးစာပေတွေမဟုတ်ဘူး… ကျန်းမာရေးဗဟုသုတမပေးတဲ့… ကျောင်းမှာပျော်အောင်စာမသင်ပေးနိုင်တဲ့…
နောက်တစ်ခုက လူအကြောင်းကို လူဖြစ်တဲ့ကလေးငယ်တွေမသိအောင် မျက်စိပိတ်ထားခြင်း…
လိင်ကိစ္စတွေကို အသက်အရွယ်အလိုက် အသိပညာပေးရပါမယ်…
သွေးသားအရ လိင်ကိစ္စကိုတောင်းတတဲ့အချိန်မှာ ကလေးငယ်တွေမှာ အသင့်ဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးပါတယ်…
မဟုတ်ရင်တော့ နဂိုကမှ ရှက်ရမယ်… ကြောက်ရမယ်ဆိုပြီး ဖုံးကွယ်ထား… မျက်စိပိတ်ထားကာမှ…
ဒီပြသနာနဲ့ဒဲ့တိုးလာကြုံရတော့ ကလေးတွေခမြာ… သားမိုက်… သမီးမိုက်တွေဖြစ်ကြရပြန်ရော…
ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုတွေမှာ ချမ်းသာတဲ့မိသားစုတွေထက် ကလေးပိုများတဲ့ဥပမာကိုကြည့်ကြပါ…
ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုမှာ Entertainment အတွက် လိင်ကိစ္စကိုပဲ ဦးစားပေးကြရတဲ့အပြင်… ကျန်းမာရေးဗဟုသုတလဲမရှိသမို့ ဆိုင်းဝိုင်းကဗုံလေးများစီထားသလို… ဟောတစ်ယောက်… ဟောတစ်ယောက်
သူတို့ဘ၀မှာ သူတို့ခံနိုင်ဝန်… သူတို့အမှန်တကယ်ခံစားနေရသော စိတ်ခံစားမှုထက်
သူတို့သွေးသားနဲ့ Entertainment လုပ်လာပါတော့တယ်…
ကျောင်းတွေ… ကျူရှင်တွေကနေ လစ်ထွက်လာပါတော့တယ်…
ကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ Stress ကို လျော့ချပေးရင်း…
လူငယ်တွေအတွက် တကယ့်ဘ၀မှာ အသုံးတည့်မယ့်ပညာရေးကိုချထားပေးရင်း…
မိဘတွေ… ဆရာဆရာမတွေနဲ့… ပညာရေးကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်း… လူပုဂ္ဂိုဟ်တို့ရဲ့
တာဝန်မကင်းဘူးဆိုတာ စဉ်းစားမိစေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်ခင်ဗျား…
ချစ်သော ကြောင်ဝလေး ကပြောတယ်။
စာကျက်စာဖတ်ဖို့ အချိန်တိုင်းတိုက်တွန်းနေတတ်တဲ့မိဘတွေလဲ တရားခံပါ…} တဲ့။
ဒါကတော့ နည်းမှား လမ်းမှား ပေးနေတာရော၊ ကိုယ်တိုင်က ရှေ့က မော်ဒယ်ကောင်း လုပ်မပြဘဲ ကလေး ကိုချည်း ဖိတွန်း နေလို့ ရောပါ။
ဥပမာ – ကလေးတွေ ကို ကိုရီးယားကား မကြည့်စေချင်ရင် မိဘတွေ ကလဲ မကြည့်မှဖြစ်မှာပါ။
ကလေးတွေ ငယ်တုန်း မှာ အဆိပ်အတောက် အာရုံတွေ မဝင်အောင် အတွက်က အကျိုးရှိနိုင်မဲ့ အကြောင်း တွေ နဲ့ ကလေး ကို အချိန်ပြည့် အလုပ်ရှုပ်ပေး နေသင့်တာအမှန်ပါ။
နောက် အသုံးမကျတာ သူ့ရှေ့က အသုံးမကျခဲ့လို့ ဆိုတာလဲ တစ်ကြောင်း။
ကလေး လမ်းမှားတာ ကျန်တာ အသာထား မိဘ အသုံးမကျ လို့ ဆိုတာ ကတော့ ငြင်းမရပါ။
ကျောင်းက ဆရာ အသုံးမကျတာ ကို မိဘတွေက ဝိုင်းပြီး ထောက်ပြနိုင်စွမ်းရှိရင် ဒီဆရာ ဒီအတိုင်း ဘယ်နေရဲပါ့မလဲ။
ကျောင်းက ဆရာ ကလဲ သူ့ပညာသင်ရတဲ့ နည်းလမ်း မမှန်တာကို သူ့အထက် တာဝန်ရှိသူ တွေ ကို တင်ပြနိုင်စွမ်းရှိနေရင် အထက် က ဒီအတိုင်း ဘယ်နေရဲ ပါ့မလဲ။
အခုဟာ က အားလုံး နေသာသလို မှေး နေနေ ကြရင်း ဟိုလိုဒီလို စကားဝဲ နေရင်း တစ်ယောက် တစ်ယောက် အပြစ်ဖို့ လက်ညှိးထိုး နေကြတာ။
ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်မယူနိုင်ဘဲ ခေါင်းရှောင်နေသမျှ ထူးမခြားနားပါတ်ပျိုး ကရင်း အနာဂါတ်ကလေးတွေ အညွန့်ကျိုးနေမှာ။
ယူအက်စ်ကကလေးတွေမှာလည်း.. ကျူရှင်.. စာ.. သင်တန်းပေါင်းစုံနဲ့မအားရပါဘူး.. ကိုရင်ဖက်ကက်ရာ..
တလောက ယူအက်စ်မှာလုပ်တဲ့ ရီဆာ့ခ်ျသတင်း အင်တာနက်မှာ ဖတ်ရတယ်..။ ခုခေတ် မိန်းခလေးတွေ ၁၁နှစ်မှာ အပျိုဖော် စဝင်သတဲ့…။ သဂျီးကတော့ ရှေးသုံး အပျိုအရွယ် ၁၀ပါးလား ၁၁ပါးလား ပြန်ညွှန်းလိမ့်အုံးမယ်။။ ဒီခေတ်မှာ စားတဲ့ အသီးအရွက် အသားငါးတွေက ပြုပြင်စီမံ ဆေးထိုးထားတာတွေမို့ ခလေးတွေ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်း မြန်ကုန်တာနေမယ်။ ရုပ်ရှင် ဗွီဒီယို သီချင်း ကြော်ငြာလို ပတ်ဝန်းကျင် လှုံဆော်မှုကလည်း ပိုဆိုးစေတယ်..။ သာမီးရှင်များ ကိုယ့်ခလေး ဆယ်နှစ်ထဲဝင်ရင် သတိထားဂျဖို့ပါ။။ နောင်မှ ကြောင်ကြီးကို အပြစ်မတင်နဲ့..
ဒီလို ကျလိကျလိ ဖြစ်စေဖို့အတွက်
အများကြီး တွန်းအားပေးပါဒယ် ..
ကလေးတွေ ချွင်ချွမ် ဆိုပီး သိုင်းချတမ်း ကစားဒါလောက် ချိဒယ် ..
ကိုယီးယား ကားတွေ ပေါ်လာဒေါ့ …
ဟော …. ရွစိရွစိ ဖစ်လာဂျဒါပေါ့ ..
ပြီးတော့ ရှိသေးသဗျ GTA Game တွေ ဆော့ပြီး အဲဒီဂိမ်းထဲကလို စိတ်ကူးတွေယဉ်ပြီး ပြိုင်ကား တွေ အပြိုင်လျှောက်မောင်းတာတွေလည်း ရှိသေးတယ်…….။ လူငယ်ယောက်ျားလေးတွေ ဆဲဆိုတတ်ခြင်းအစ Net Game ဆိုင်ကဆိုပြီး နာမည်တွင်သွားလေရဲ့
ခေတ်မှီမှု ခေတ်မမှီမှု ခေတ်ပြောင်းခြင်း ခေတ်မပြောင်းခြင်း ခေတ်ဆန်ခြင်း ခေတ်မဆန်ခြင်း ……. အဲလို အဲလိုတွေမှာ ကောင်းမွေဆိုးမွေတွေကတော့ ဖြစ်နေကျပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် အများလို အနည်းစားချေ ဆိုတဲ့ပုံသေနည်းလိုပါဘဲ အနည်းစုဖြစ်ပျက်မှုကို လတ်လလောမှာ လစ်လျူရှုသလိုမျိုးဖြစ်တတ်ကြပေမယ့် အဲဒီဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာတွေကို အခြေခံပြီး ပြုပြင်မှုတွေ ပြင်ဆင်ပေးမှုတွေ ထပ်ပြီးကွန့်မိကြမယ် ဆိုရင်တော့ ခေတ်မှီမှု ခေတ်ပြောင်းမှု ခေတ်ဆန်မှုတွေရဲ့ ရလာဒ်သည် ကောင်းကျိုးများစွာဖြစ်စေမှာပါ။ တစ်ချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ ခေတ်မှီ ခေတ်ဆန်ဖို့ ခေတ်ပြောင်းတဲ့ကာလကို ဖြတ်သန်းနေတဲ့ အချိန်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်း အမျိုးသားပညာပေးမှု စီမံကိန်းတွေကလည်း အတူတွဲလုပ်ကြတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံတွေကတော့ ခေတ်စနစ်ပြောင်းခေတ်မှီလာတာနဲ့အမျှ ကောင်းကျိုးရမှု စနစ်ကျမှုတွေကို ပိုခံစားရတာပေါ့လေ။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ ပြောင်းမှရမယ့်အခြေအနေမို့ ပြောင်းကြပေမယ့် ရလာဒ်ကို ပြန်မသုံးသပ်ဘဲ အပေါ်ထပ်အဆောက်အအုံဘဲ ဆက်တိုက်ပြောင်းနေရင်တော့ စတေးခံရသူ ဘယ်သူရှိမလဲဆိုတာ တွေးကြည့်ကာစဉ်းစားကြပေါ့ဗျာ။
ဥပမာလေးတစ်ခုပြောရရင် ဟိုအရင်က တံခါးပိတ်ဝါဒလုပ် အာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်စဉ်မှာ ကျောင်းတံခါးတွေပါ ပိတ်ပစ်လိုက်တာမို့ အစိုးရအတန်းကျောင်းအောင်မြင်ပြီးရင် ဘာတတ်လဲဆိုရင် ဘာမှမတတ်ဘူး။
အဲ အခုတော့ နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်သွယ် တံခါးဖွင့်ဝါဒ ကျင့်တုန်းပြန်တော့ အတားအစည်း မရှိအောင် ကျောင်းတံခါး ပါဖြုတ်သိမ်းသွားပြန်တော့ ညရေးညတာသူခိုးဘေးက ပူရပြန်ရောကွယ်။ မလုပ်ပြန်ရင်လည်း သူတို့အပြင်မရှိ လုပ်ပြန်တော့လည်း အလွန်အကျွံကို အရပ်ထဲပြောတာကတော့ ” မင်း ရွဲ့ များ ရွဲ့ နေ တာ လား ” တဲ့လေ။
ခု ဆို ….
ညဘက် မထွက်နိုင်တဲ့ ကလေးတွေ အတွက် ဒေး ကလပ် ရှိတယ် ဆိုပဲ။
အာ့ဆို အိမ် က နေ့ဘက်ထွက်လို့ပြီး သွားလို့ ရသတဲ့!
ဒါလေး အရင်လာပြတာ.. နောက်မှ လာပွားပါမယ် ခရီးသည်ကြီး..
ဒါတောင် မြို့ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ လျှပ်စစ်လိုင်းပင်မရတဲ့တောအရပ်မှာပါ